Saint Valentin : Avoahay ny lokomena midorehitra
Manome endrika ny tarehy iray manontolo ny fahaiza-manaingo ny molotra. Na tsy manao haingon-tava
Azo sitranina ve ny panda ?
Anisan’ireo olana goavana eo amin’ny hodi-tava ka mampatahotra ny vehivavy maro ny resaka tasy maramara sy panda. Mazàna dia miainga amin’ny fiovan’ny lokon-tava ny panda, miroso amin’ny mivoara mena ary miafara amin’ilay tasy maramara amin’izay.
Manasa tarehy amin’ny rano mafana, mety ve?
Fihetsika tsy azo dinganina, ka tokony atao maraina sy hariva, ny fanadiovana tarehy.
Mifantina ranomanitra ho an’ny olon-tiana
Manambara fitiavana ny ranomanitra, ka tsy vitsy ireo mora babon’ny fofona manimanitra. Amin’izao ankatoky ny fetin’ny mpifankatia izao, tolory ranomanitra ny olon-tianao. Mahaiza anefa mifantina izay tiany sy mifanaraka aminy …
Tandremo ihany ny masonjoany !
Akora voajanahary isan’ny tena be mpampiasa eto amintsika ny masonjoany. Tena tsara sady mandaitra no mitondra soa ho an’ny hoditra tokoa ity akora ity. Na izany aza nefa dia mila fitandremana ihany ny fampiasana azy.
Hoditra miroraka, azo averina amin’ny laoniny
Aorian’ny vohoka dia mety hivaha ny fizozoran’ny hoditra, na ny an’ny hodi-tava izany na ny an’ny vatana.
Tarehy miha-miroraka … atao ahoana ?
Tsy miankina amin’ny salan-taona ny fahanteran’ny tarehy. Mety hiseho aloha loatra ny kentrona, ny firorahana, ny fahamainan’ny hodi-tava, ny panda…
Misy mantsy ireo fanao amin’ny andro mafana, raha eo ihany koa ireo fitondra amin’ny andro mangatsiaka. Ny ho resahantsika eto izao dia ny ranomanitra sy ny ririnina.
Rehefa ririnina ny andro, dia natao hanome hafanana sy handrakotra ny vatana ny ranomanitra. Raha ranomanitra mitondra hafanana araka izany dia mitodika any amin’ireo naoty “boisés” na avy amin’ny hazo sarobidy kokoa ny orona. Ireo tena ranomanitra na “eau de parfum” ihany koa no tsara hanaovana rehefa mangatsiaka ny andro. Ajanona vetivety aloha ny « eau de toilette » sy ireo mitovitovy amin’izany fa « Parfum » sy « Eau de Parfum » kokoa no safidian. Ny antony dia satria mateza fofona kokoa ny ranomanitra noho ireo endrika hanitra maro.
Lavanila, raozy, kanelina, …
Hanitra lavanila no tena mora hamantarana ny fofon’ny ririnina. Somary mahery ary maharitra sy toa manenika izay. Raha toa kosa anefa ka mpankafy naoty avy amina hanitra voninkazo dia azo safidiana tsara ny raozy sy ireo tsy dia mifanalavitra azy. Ankoatra izay dia mety ihany koa ireo ranomanitra hafa izay misy fangarona hanitra episy somary re tsara, toy ny kanelina ohatra na ny “romarin”.
Fitsipika mila tadidiana
Ranomanitra maherihery no ilaina rehefa ririnina, mba hamonto hafanana ny vatana. Naoty « gourmand », na « oriental » na koa « chypré » no mety kokoa.
- Ho an’ireo “gourmand” : Poison girl, Pure XS, La vie est belle …
- Ho an’ireo « oriental » : L’interdit, Dior Addict, Shalimar souffle de parfum intense…
- Ho an’ny Chypré : Si intense, Scandal, Mon Paris Couture…
Isaorana i Carol Rasolovoniaina avy ao amin’ny Appeal Madagascar tamin’ny fiaraha-miasa. Mivarotra ranomanitra ary manome torohevitra mikasika izany koa izy ireo. Fifandraisana : 034 46 011 28